फिल्म निर्माणमा कलाकार | Tourism of Nepal
फिल्म निर्माणमा कलाकार
नाफा नहुने भए कसैले लगानी गर्छ ? फिल्म हात पर्ने क्रम ओरालिँदै गएपछि निर्माणमा हात हालेकी रेजिना उप्रेतीले भनेकी थिइन्– अरूले फिल्म बनाउनु र हामी (कलाकार)ले बनाउनुमा अटोम्याटिकल्ली डिफरेन्ट हुन्छ ।
रेजिनाले भनेको कुरा सही रहेछ । उनको फिल्म ‘अटोम्याटिकल्ली डिफरेन्ट’चाहिँ भयो । ‘डिफरेन्ट’ अर्थात् फरक । फरकचाहिँ के भयो भने ‘रेजिना उप्रेतीको वरदान’ भन्दा पनि हलमा दर्शक आएनन् । जसकारण उनलाई उनकी पार्टनर कविता श्रेष्ठले फिल्मको घाटा असुल गर्न मुद्दामामिला गर्नुपर्‍यो । दिदीबहिनीको सम्बन्ध समाप्तै भयो । रेजिनाले पुन: निर्मात्री हुने आँट गरिनन् ।
रेजिनाको फिल्मको मात्र कुरा होइन, तत्कालीन नम्बर एक हिरोइन करिश्मा मानन्धरले निर्माण गरेको ढुकढुकीले पनि प्रचुर दर्शक पाएन । त्यसपछिको उनको बाबुसाहेबले त पीडा दियो । बाबुसाहेब फ्लप भएपछि करिश्मा ६ वर्ष अमेरिकातिरै बसिन् । करिश्माले त्यतिवेलै घोषणा गरेको जुनेली पनि बनेन । अहिले आएर उनी पुन: फिल्म निर्माण गर्न कस्सिएकी छिन् । गोपीकृष्ण मुभिजसँगको सहकार्यमा करिश्माले निर्माण गर्न लागेको अनटाइटल्ड फिल्मको निर्देशन भने सम्झना उप्रेती रौनियारले गर्ने भएकी छिन् ।
चर्चित कलाकारले निर्माण गरेको फिल्मप्रति दर्शकको आशा धेरै हुने र त्यसअनुसार तगडा फिल्म बनाउन र मार्केटिङ गर्न नसक्ने हो भने घाटासिवाय अरू उपलब्ध हासिल नहुने तर्क छ, निर्माता तथा वितरक माधव वाग्लेको । ‘म सुपरस्टार हुँ भनेर धक्कु लगाएर के गर्नु ? फिल्ममै दम हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘साथीभाइले वाह–वाह गरेर मात्र भएन, दर्शक तान्न सक्नुपर्‍यो नि ।’ वाग्लेले कतिपय कलाकारले हचुवाका भरमा फिल्म निर्माण र प्रदर्शन गर्ने भएकाले धोका पाइरहेको बताए ।
‘कलाकारको फिल्मप्रति दर्शकको एक्स्पेक्टेसन हाई हुन्छ,’ रोमान्स किङ अभिनेता तथा निर्माता भुवन केसी भन्छन्, ‘त्यही भएर म धेरै सोचविचार गरेर मात्र फिल्म बनाउँछु ।’ उनले आफूले दर्शकको रुचि बुझेर फिल्म बनाउने गरेकाले अहिलेसम्म घाटा नभएको दाबी गरे ।
पूर्ण व्यावसायिक दृष्टिबाट फिल्म बनाए घाटा नहुने बताउँछन् आर्यन सिग्देल । ‘पर्दामा देखाउने कुरामा कम्प्रोमाइज गर्नुभएन,’ नोभेम्बर रेनपछि क्लासिक नामक फिल्म निर्माण गर्न लागेका उनी भन्छन्, ‘म कलाकार हुँ, स्टार हुँ भनेर अहमता राख्नुहँुदैन । त्यसो गर्नु दर्शकप्रति अन्याय हो ।’
बिर्खेलाई चिन्छस्का निर्मातासमेत रहेका अभिनेता सुवास थापा फिल्म राम्रो बनाएर मात्र नहुने बताउँछन् । ‘मार्केटिङ र रिलिजिङबीचको तारतम्य पनि मिल्नुपर्दाे रहेछ,’ बिर्खेले आफूलाई घाटा नलगाए पनि अपेक्षित फाइदा नदिएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘सबै कुरा मिल्नुपर्दाे रहेछ । तर, फिल्मचाहिँ राम्रो बनाउनैपर्छ । नत्र खैरियत छैन ।’
निर्मात्री अभिनेत्री झरना थापाले निर्माण गरेका धर्मसंकट, गोर्खाली, ए मेरो हजुर र तक्दिरबाट मुनाफा कमाए पनि दुई वर्षअघि निर्माण गरेको फेसबुकले भने डुबायो । जसकारण उनमा हत्तपत्त फिल्म बनाइहाल्ने सोच आएन रे । तर, अब भने उनी आफ्नै निर्देशनमा– ए मेरो हजुर–२ बनाउने तयारीमा छिन् । अचेल अभिनयमा अलि फुर्सदिली भएकी झरना नयाँ वर्षसँगै निर्देशनमा उत्रने तयारीमा छिन् ।
पुरानी हिरोइन मौसमी मल्लले निर्माण गरेको गिरफ्तार हिट भएको थियो । तर, उनले आफ्नो छोरा बिक्कीलाई हिरो बनाएको समय भने फ्लप भयो । त्यसपछि उनले फिल्म बनाएको सुनिएको छैन । जेनी कुँवर त अभिनेत्री मात्र नभई निर्मात्रीसमेत हुन् । उनले घायल र हलचल दुई फिल्म निर्माण गरिन् । ‘घाटा भयो’ भन्दै फिल्म बनाउन मात्र होइन, अभिनयमा पनि विश्राम लिएकी छिन् । ऋचा घिमिरेले निर्माण गरेको ब्रेकफेल असफल भयो । ऋचा पति शंकर घिमिरेका साथ अमेरिकामा रहेकाले तुलसी पनि रिलिज भएको छैन । शंकर केही महिनापछि स्वदेश फर्किएर तुलसी रिलिज गर्ने योजनामा छन् ।
निखिल उप्रेती त हिरोमा जम्दैदेखि नै निर्माणमा लागेका हुन् । उनले निर्माण गरेको सावधान र संयुक्त लगानीको निशाना पनि ठिकठाकै भएको थियो । अहिले आएर उनी आफ्नै निर्देशनमा भैरव निर्माण गरिरहेका छन् । भैरव वैशाख १८ मा रिलिज हुने कुरा छ । अभिनेता नीरज बरालले निर्माण गरेको स्टुपिड मनले मुनाफा त दिएन, तर घाटा पनि नलागेको निर्माण पक्षको दाबी छ । अर्का अभिनेता सुमन सिंह पनि फिल्म बनाउने तयारीमा छन् ।
रेखा थापा अभिनेत्री मात्र नभई निर्मात्रीका रूपमा परिचित छिन् । काली, हिम्मतवालीपछि उनी रामप्यारीको तयारीमा छिन् । पछिल्लो समय नम्रता श्रेष्ठले पनि फिल्म निर्माण गरेकी छिन् । उनले निर्माण गरेको सोल सिस्टर माघ २ गते रिलिज हुने सुन्नमा आएको छ । पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले हाल हाउ फन्नी निर्माण गरिरहेकी छिन् । सिजी इन्टरटेन्मेन्टसँग मिलेर ऋचा शर्मा र विनय श्रेष्ठले निर्माण गरेको भिसा गर्ल फ्लप भयो । त्यसपछि भिसा गर्लका निर्देशक प्रचण्डमान श्रेष्ठले अर्काे फिल्म निर्देशन गरेको खबर आएको छैन । ऋचाले पनि फिल्म बनाएकी छैनन् । तर, विनयले भने रेशम फिलिली निर्माण गरेका छन् । सबैको एउटै आशा छ– मेरो फिल्म सुपरहिट हुन्छ । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
तपाई पर्यटनसम्बन्धी समाचार सिधैं फेसबुक र ट्वीटरमा प्राप्त गर्न लिङ्कमा क्लिक गरेर फलो वा लाइक गर्न सक्नु हुनेछ ।
गायिका मोनाली अब नायिका
राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आदिवासी फिल्म महोत्सव
भर्खरै राखिएको समाचार
Tourists’ arrival on the rise in Antu hills
ओझेलमा पर्यटकीयस्थल मार्गा पोखरी
अन्तुमा पर्यटकको चहलपहल बढ्यो
एक वर्षमा एघार हजार पर्यटकद्वारा कोशी टप्पुको अवलोकन
किसानलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
पर्वतारोहण सङ्घको नेतृत्वका लागि दौडधुप
पर्यटकका लागि काउलेपानी उत्कृष्ट गन्तव्य
उत्तरपूर्वी भारतसँग पर्यटनमा साइनो गाँसिदै
पर्यटकीयस्थल स्वरेकमा बहुउद्देश्यीय भवन
पोखराको पर्यटन विकासमा जोड
Dilli Bhattarai: नेपाल र भारतका धेरै तिर्थयात्री नेपालको मुस्ताङ जिल्लामा रहेको मुक्तिनथ र तिब्बतमा रहेको...
Puran: Lovely village, want to return to visit again
Dilli Bhattarai: नेपाली राष्ट्रिय बुद्धिस्ट सिर्किट लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर कपिलवस्तुस्थित तिलौराकोट र ५७...
भुपेन्द्र बिस्त: तपाईं लाई धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद जानकरिको लागि ।अब भने देश का सासक नेता हरुले केही गर्नु पर्ने...
Krishna Sapkota: जानकारीका लागि धन्यवाद !
© 2018 Tourism of Nepal. All Rights Reserved S and D Media Pvt. Ltd. - Developed by SUMAN SHRESTHA